न्यादी हाइड्रोपावरको आइपिओ रिजल्ट अब हेर्न मिल्ने, यसरी हेर्नुहोस् !
काठमाडौँ – न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को नतिजा अनलाइनमा सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार बिहान भएको आइपिओ बाँडफाँडको नतिजा अनलाइनमा उपलब्ध भएको हो।
बाँटफाँडको नतिजा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको बेवसाइट (मेरो शेयर)मा उपलब्ध भैसकेको छ। नतिजा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धकको बेवसाइटबाट पनि हेर्न सकिन्छ।
यहाँ गएर आइपिओको नतिजा हेर्न सकिन्छ !
प्रकाशित : शुक्रबार, कार्तिक ०५, २०७८१४:५५